Off-Grid rivotra herin'ny masoandro sy ny herin'ny famatsiana solika mifangaro rafitra - China Renergy Equipment Co., Ltd
Miara-miasa fitsipiky ny rafitr'ity tontolo ity:
Wind turbine sy ny masoandro tontonana hiteraka herinaratra, ny herinaratra dia voampanga ho any amin'ny vondrona bateria ny mamaly ny maso, ary avy eo amin'ny alalan'ny inverter, ny rafitra famatsiana AC hery ho an'ny entana. Diesel gropy no ampiasaina ho toy ny indray ny fahefana, dia manomboka rehefa rivotra sy ny masoandro dia tsy ampy, hitandrina any an-bateria mba hiarovana ny bateria.
Ity tontolo ity no be mpampiasa raha tsy misy hery amin'ny faritra lavitra; Mba hampihenana ny fandaniana angovo sy ny tontolo iainana ny fandotoana sy afa-vola, dia mihatra rivotra sy ny masoandro hery hitsena ny fampiasana hery takiana. Ity tontolo ity afaka mampiasa feno ny vaovao hanatsarana ny hery sy ny fahefana vaovao fahombiazana mba hampihenana ny fandaniana solika sy ny tontolo iainana ny fandotoana ary tehirizo angovo
RW-5kW miova dity ny fiara, DC240V
Tilikambo sy ny Accessories
8m, monopole tilikambo
Solar rafitra sy ny bracket
Off-Grid amin'ny herin'ny masoandro sy ny rivotra solika mifangaro-maso
5kW rivotra, 5kW masoandro, DC240V
Battery sy ny Bracket
Modularized famolavolana; hanatsarana ny rafitra azo itokisana amin'ny alalan'ny teny famolavolana, izay miantoka ny rafitra dia mbola afaka miasa rehefa subsystems iray amin'ireo manana hiasa araka ny tokony.
Tsara fahefana famatsiana antoka
Multiple angovo complementation; mifehy ny laharana hery mifamadika Diesel ny fampiasana hery rehefa tsy ampy angovo rafitra ary mandritra izany fongotra entana tsy ilaina mba hanitatra ny rafitra famatsian fahefana ny fotoana.
Koa satria ny Kilonga dia mampiahiahy ny hery sy voafetra, ny fahombiazan'ny ny rafitra dia tsy maintsy ho sarobidy; ny rafitra mandany hery IGBT Modules sy ny fanaraha-maso ny fomba PWM mba hampihenana ny rafitra fanjifàna angovo.
Mampiasa ny rafitra Modular endrika ho antoka ny rafitra scalability; manome ny jiro mba hampitombo ny rafitra fahefana fahafahana mba hahazoana antoka ny rafitra fanavaozana
Ny rafitra manontolo fampiharana mandany fomba mandeha ho azy ny hifehy ny rafitra fanaraha-maso sy ny hampihenana ny olona, ​​tsy mba hanatsarana ny miasa fahombiazana, nefa koa mampitombo ny rafitra fiarovana sy azo itokisana
Home fampiharana, nosy, tanàna kely, kely hery toby, bitika Grid rafitra, ambanivohitra an-trano, kely Holdings, fambolena, ara-barotra.
Application tranga fianarana